विदेश जान मेनपावरमा पासपोर्ट बुझाएर सामुहिक कृषि खेतिमा – Palpapati
Home > समाचार > राष्ट्रिय > विदेश जान मेनपावरमा पासपोर्ट बुझाएर सामुहिक कृषि खेतिमा
विदेश जान मेनपावरमा पासपोर्ट बुझाएर सामुहिक कृषि खेतिमा
October 17, 2020 Bishnu266
पाल्पा ०१ कार्तिक ०७७
कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछी वगनासकाली ६ यम्घा भुटुकेका ५ जना युवाहरुले सामुहिक कृषि खेती सुरु गरेका छन् । प्रदेश सरकारको कोभिड कृषि कार्यक्रमको सहयोगमा युवाहरु सामुहिक कृषि खेतीमा लागेका हुन् ।
यम्घा भुटुकेका वेनीराम वि.क.टीका बहादुर विक., वीर बहादुर वि.क., ऋषि वि.क. र विक्रम लामिछाने वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लाग्नुभएको थियो । गत चैत्रमा मेडिकल र इन्टरभ्यू सक्याएका ५ जनानै कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले विदेश जान पाएका थिएनन् । वगनासकाली गाउपालिकाबाट कोभिड कृषि कार्यक्रमको १ लाख सहयोग लिएर कृषिमा लागेका हुन् ।
उनीहरुले १४ रोपनी जग्गा वार्षिक १२ हजार रुपैया भाडामा लिएर कृषि खेती गरेका छन् । टमाटर, खुर्सानी, भिण्डी, वोडा लगायतका उपजहरु लगाएर ३५ हजार मुनाफा गरेको वेनिराम वि.क. बताउनुहुन्छ । यम्घा भुटुकेका ३४ वर्षिय वेनीराम र साथीहरुले अहिले फर्ममा खुर्सानी, टमाटर लगाउनुभएको छ, उनीहरु मल्चिङ पलास्टीको प्रयोग गरेर वोडी समेत लगाएका छन् ।
५ जनानै अव विदेश नजाने सोचमा छन् । उनीहरु कृषिमै रमाउन थालेका छन् । घरभन्दा तलको फाँटमा कृषि कर्म गरिरहेका उनीहरुलाई पानीको लागि समस्या छ, फाँट माथीको पानीको मूल हिँउदमा सुक्छ, खोलाको पानी तानेर खेतमा ल्याउने सोचमा रहेको वेनीराम वि.क. बताउउनुहुन्छ । पानीको समस्या समाधानका लागि वडाबाट पहल गरिएको वगनासकाली गाउपालिकाका प्रवत्ता तथा वडा अध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
उनीहरु मध्ये १ जना साउदी र वाँकी ४ जनानै मलेशियाबाट फर्केका युवाहरु हुन् । विदेशको दुःख वेहोरिसकेका युवाहरु आफ्नै गाउँमा उद्यम गर्न चाहेका छन् । उनीहरु फाँटमै एउटा टहरो वनाएर आलोपालो बस्नेगरेका छन् ।
पाल्पा अस्पतालको आकस्मिक वाहेकका सेवा वन्द
पाल्पामा शनिवार ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
मुलढोका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै
कोरोना भाइरस फैलिन नदिन तानसेनमा डिसइन्फेक्सन स्प्रे